सौन्दर्य तथा फेसन Archives - Page2of2- Aamsanchar
Category: 'सौन्दर्य तथा फेसन'
स्तन बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउन सक्नु हुनेछ !
काठमाडौं । शिशुको लागि अमृत मानिने स्तन यौनसम्पर्कको उत्तेजित अंगपनि हो । स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र […]
पूर्वाञ्चल क्यानसर हस्पिटलको प्रस्तुतिमा मिसेस चितवन घोषणा
पूर्वाञ्चल क्यानसर हस्पिटल बिर्तामोडको प्रस्तुतिमा सम्पन्न मिसेस चितवन २०१९ को उपाधि भरतपुरकी जमुना श्रेष्ठले जितेकी छन् । भ्याली स्टेट कलेजकी प्रिन्सीपल समेत रहेकी श्रेष्ठले अन्य २१ प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै सो उपाधि जितेकी हुन् । दुई […]
बिर्तामोडमा मिस टिन झापा छनौट कार्यक्रमको तयारी
चारपाने, जेठ १६ । बिर्तामोडमा मिस टिन झापाको छनौट गर्ने तयारी सुरु भएको छ । झापाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका युवतीहरुलाई आफ्नो अन्तरनिहित क्षमता प्रस्र्पोटन गराएर एकै ठाउ“ सहभागी बनेका मध्येवाट उत्कृष्ट युवतीलाई यस बर्षको मिस […]
फेसियल गर्नु ठिक कि वेठिक ? जानकारी लिनुहोस् ।
फेसियल गर्नु भनेको अनुहारको व्यायाम गर्नु हो । फेसियल गर्दा हाम्रो अनुहारको छाला ताजा र चम्किलो हुन्छ । फेसियले अनुहारको छाला तन्काउने काम गर्दछ । ३०–३५ वर्ष उमेर पाछि मात्र फेसियल गर्नुपर्छ भन्ने हामे धारणा […]
अनुहार चम्काउने घरेलू तरिका
सुन्दर अनुहार कसको चाहना होइन र सुन्दर बन्न कसलाई मन हुन्न र अनुहार सुन्दर बनाउन ब्यूटीपार्लर तथा सैलन धाउनेहरुको कमी छैन । अनुहार चम्काउन मानिसहरु सौन्दर्य प्रसाधनमा हजारौं खर्च गर्छन्। ब्युटी पार्लर धाउँछन्। तर कतिपय […]
गर्मीको मौसममा कपालको हेरचाह
अहिले गर्मीको मौसम छ । गर्मीको समयमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाइ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्मीमा खानपिनमा त विशेष ध्यान दिनुनै पर्छ, यससँगै हाम्रो सुन्दरतालाई पनि जोगाउन आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सुन्दरतासँग जोडिएको […]
मेहन्दी कसरी लगाउने???
महेन्दी लगाउनुअघि राम्रो सेम्पुले केश पखाल्ने । साबुन सकेसम्म प्रयोग नगर्ने । सेम्पु गरिएको केश राम्रोसँग सुक्खा बनाउने । दिइएको निर्देशनअनुसार मेहन्दीलाई कचौरामा राखेर भिजाउने । पानीको मात्रा ठिक्क हुनुपर्छ, मेहन्दीको प्याकेटमै त्यसको मात्रा उल्लेख […]
छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएपछि नेकपामा अब के होला ?
कोरोना संक्रमण भएका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने अस्पताल भर्ना
एकै दिन ३९६ वटा अस्पताल एकैसाथ शिलान्यास गरिदै (सूचीसहित)